जनप्रिय माविकोे भवन शिलान्यास – धौलागिरी खबर
रिखार राष्ट्रिय दैनीक
Dhaulagiri Khabar -
जनप्रिय माविकोे भवन शिलान्यास
धौलागिरी खबर	 २०७८ पुष ९, शुक्रबार २१:४८ गते मा प्रकाशित 194 0
दरबाङ । मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ६ छ्यारेछ्यारेमा निर्माण हुन लागेको जनप्रिय माविको शुक्रबार भवन शिलान्यास भएको छ ।
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले १६ कोठे पक्की भवनको शिलान्यास गरे । क्याप्टेन जितबहादुर घर्ति मगरको पहलमा गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टको सहयोगमा छ्यारेछ्यारेमा भवन निर्माण भइरहेको छ । भवन निर्माणमा कुल दुई करोड ८६ लाख रुपैयाँ लागत मध्ये विद्यालयले दश प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ ।
भवनको शिलान्यास गर्दै अध्यक्ष रोका मगरले सहयोगी गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मालिका गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने बताउनुभयो । भवन निर्माण र विद्यालयलाई गााउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गाउँपालिकाले सामुदायीक विद्यालयमा स्रोत साधन उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा जोड दिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालु र वडा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले विद्यालयलाई आगामी दिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विद्यालयका प्रअ दिवाकर सुवेदीले भवन निर्माण सहयोगी गोर्खा वेलफेयर ट्रष्ट र पहल गर्ने क्याप्टेन घर्तिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । पहिलेको भवन साँघुरो हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको विद्यालयका प्रअ सुवेदीले बताउनुभयो ।
भवन निर्माण भएपछि पठनपाठनमा सहज हुने बताउँदै प्रअ सुवेदीले पुरानो भवनलाई आवासीय छात्रावासको रुपमा प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी असार दोस्रो हप्ता भवन निर्माण सम्पन्न गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सुपर भाइजर डम्बर थापाको निगरानिमा गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गौमति चापागाइको अध्यक्षता र विद्यालयका प्रअ सुवेदीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा अधिकृत अशोक रिजाल ,इलाका प्रहरी कार्यालय दरबाङका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पौडेल लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । छ्यारछा्यारेमा यस अघि पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट चार कोठे र शिक्षा विभागबाट चार कोठे भवन निर्माण गरिएको छ ।
इमेल ठेगाना : [email protected]
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता न. २३५८ ०७७ ७८
सम्पादक: दुर्गा आचार्य गौतम
कार्यकारी सम्पादक प्रबन्ध निर्देशक: सन्तोष गौतम
प्रकाशक: म्याग्दी मालिका मिडिया प्रा.ली
ठेगाना : बेनी नगरपालिका–७ म्याग्दी
सम्पर्क न.: ०६९५२१२४२,९८४७६३३५६९
© 2022 - धौलागिरी खबर. सर्वाधिकार सुरक्षित